ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ ထူးခြားမှုများ᠌᠌᠌ ===================== | Myanmar Gazette News Media Forum Network
History » ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ ထူးခြားမှုများ᠌᠌᠌ =====================	7
Posted by သျှားသက်မာန် on Dec 12, 2016 in History, Local Guides, Travel |7comments
ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး Highways လမ်းမ Pan American ရှိသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။လမ်းမအရှည်မှာ မိုင်ပေါင်း (၂၀၀၀၀)ကျော် ရှည်လျားသည်။ အကျဉ်းသားများ (၂.၂) သန်းကျော်ရှိသော ကမ္ဘာ့ အကျဉ်းသား အများဆုံးရှိသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့အမြွှာအများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။လူဦးရေ (၁၀၀၀)တွင် အမွှာ (၂၈)ယောက်ရှိကြသည်။
ကမ္ဘာ့ပေါ်ရှိ ရေကန်ပေါင်း၏ (၆၀%) တည်ရှိသော ကမ္ဘာ့ရေကန် အများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းရှိပြီး၊ အမြဲတမ်းစစ်တပ် မရှိသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။
ကျွန်းပေါင်း (၁၈၀၀၀၀)ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ကမ္ဘာ့ကျွန်းအများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။
နိုင်ငံလူဦးရေထက် သိုးကောင်ရေများက အဆ(၂၀၀)ပိုများသော Sheep City ကမ္ဘာ့သိုးကောင်ရေ အများဆုံးရှိသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။
အပိုင်းပေါင်း (၁၅၈)ပိုဒ် ပါဝင်သည့် ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး နိုင်ငံတော်သီချင်းမှာ ဂရိနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်သီချင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံ၏ ဘာသာစကားမှာ စာလုံးပေါင်း (၁၃)ခုသာ ပါဝင်သော ကမ္ဘာ့စာလုံးရေ အနည်းဆုံးသာရှိသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။
နိုင်ငံဧရိယာ၏ (၉၉%)ခန့်အား သဲကန္တာရက ဖုံးလွှမ်းထားသော ကမ္ဘာ့သဲနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သည်။
နောင်တစ်ချိန်တွင် ပင်လယ်၊သမုဒ္ဒရာရေအောက်သို့ ရောက်ရှိသွားမည့် ကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင်အနိမ့်ဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။
နော်ဝေး ******* နိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ရေအားလျှပ်စစ် (Hydro Power) မှ (၉၉%) သုံးစွဲသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပူအာနယူးဂီနီ ************
ဘာသာစကားပေါင်း (၈၂၀) ရှိသော ကမ္ဘာ့ဘာသာစကား အများဆုံးရှိသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။
နိုင်ငံဧရိယာအတွင်း မြစ်လုံးဝမရှိသော (No River Country) ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။
မီတာ(၇၀)ကျယ်ဝန်းပြီး နှစ်ပေါင်း(၄၀)ကျော်အကြာထိ လောင်ကျွမ်းနေသော မီးတွင်းကြီးရှိသည့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။
မြန်မာ ****** ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအရှည်ဆုံးသော ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အကြီးဆုံး ဒုတိယကမ္ဘာစစ် စစ်သင်္ချိုင်းရှိသောနိုင်ငံ(၃)နိုင်ငံထဲတွင် တစ်ခုပါဝင်သော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ သနပ်ခါးပင်အား မျက်နှာအလှအပ (Make Up) အဖြစ် အသုံးပြုသော ကမ္ဘာ့ပေါ်တွင် တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။
kai says: America အမေရိကားကို.. အမေရိကန်လို့ရေးတာလည်းမှားတယ်..။
Pan-American ကို.. အဓိပ္ပါယ်ယူပုံလည်း မှားပါတယ်..။
Pan-American – Wikipedia
Pan-American, Pan American, Panamerican, Pan-America, Pan America or Panamerica may refer to: Collectively, the Americas: North America, Central America, South America and the Caribbean. Something of, from, or related to the Americas. Pan-Americanism, an integrationist movement among the nations of the Americas.
သျှားသက်မာန် says: ဟုတ်ကဲ့မှတ်ထားလိုက်ပါမယ်
Thint Aye Yeik says: ဒို့နိုင်ငံက အဆန်းကြယ်ဆုံးပဲ။
ဧရာဝတီ. . .
ရတု ကဗျာတွေ ရှိတယ်
ပြီးတော့ အဲ့ဒီသင်္ကေတတွေနဲ့ လုံးဝ မလိုက်ဖက်သော မငြိမ်းချမ်းသော ပြည်တွင်းစစ်တွေ ရှိတယ်။
kai says: အီဂျစ်ဆိုရင်လည်း..
တကယ်တော့.. နိုင်ငံတိုင်း အလှကိုယ်စီရှိကြပါတယ်.။
အဲဒီအလှတရားတွေကိုဖျက်တာ.. ပြည်တွင်းစစ်…ဆိုတာထက်.. စစ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတခု..။
ဘာသာရေး..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2714
ကထူးဆန်း says: ဘာသာရေး ကို ဆိုဆုံးမ မှု အတိုင်း မလိုက် နာ သူတိုကြောင့် ဆို ပိုမှန်လေမလား …….
ကမ္ဘာစစ်ပွဲများအားလုံး.. လိုလို.. ဘာသာရေးကြောင့်..။
Was this answer helpful?LikeDislike 331
သျှားသက်မာန် says: ဟုတ်ပါ့ပြည်တွင်းစစ်တွေကပြီးကိုမပြီးနိုင်တော့ဘူး